I-Endesa kumda wokunyuka simahla | Ezezimali
I-Endesa kumda wokunyuka simahla
Enye yeendaba ezintsha eziza kuthi kulo Disemba kukuba inkampani yombane i-Endesa sele iza kufikelela kwinani lokunyuka simahla. Le yenye yezona ntshukumo zintle zokuhamba kokhuseleko oludweliswe kwiimarike zezabelo. Konke oku, ngenyanga engathandekiyo kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngenxalenye elungileyo yamaxabiso esalathiso sesitokhwe sikazwelonke kwizikhundla ezibi, nakumaxabiso athile anexabiso elineemilo ezimbini. Ngaphandle komzuzu kukho iindaba zokuba kudala zilindelwe Irally yeqela lekrisimesi engekabonakali.
Ngomxholo apho imarike yemasheya yaseSpain yenzakala kakhulu ngokulahleka kulo nyaka ngaphezulu nje kwe-13%. Ngelixa ngokuchaseneyo, i-Endesa ixabisile ngeli xesha ngaphezulu kwe-10%. Umahluko othe waqaphela uninzi lwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngayo, uxinzelelo lokuthenga lubekwa ngokucacileyo kumthengisi. Ngethemba lokuba ukunyuka kunokuqokelelwa ngasekupheleni konyaka. Oku kuyinyani ngalo mzuzu kanye nokulinda iintsuku zokugqibela kwiimarike ze-equity.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku ukuya phambili kukuba izabelo ze-Endesa ziya kufumana nge-2 kaJanuwari 2019 isabelo esineenzuzo esisondele kakhulu kwi-7%. Oku kuchaza ukuba kutheni kunqabile ukuthengisa kwinkampani yombane ye-Itali Enel. Oku kunokuba ngumqondiso onamandla wokuba izikhundla zokuthenga ziya kuba nakho ukuqhubeka ngeentsuku zokugqibela zalo nyaka eziza kuphela. Nangona okwangoku, imbonakalo icacile ukuba inomdla kubatyali mali abancinci nabaphakathi abathathe izikhundla kule nkampani idwelisiweyo.
1 I-Endesa isondele kakhulu kwii-euro ezingama-21
2 I-MS ihlaziya ixabiso layo phezulu
3 Okokuqala-kwesinye isahlulo
4 Ixesha elifanelekileyo le-electrics
5 Ukwamkelwa okuhle kunciphiso
I-Endesa isondele kakhulu kwii-euro ezingama-21
Okwangoku izabelo zenkampani yombane yaseSpain zikufutshane nee-euro ezingama-21 ngesabelo ngasinye kwaye ziphantsi kwendlela ecacileyo Ukunyusa onke amaxesha abekiweyo: imfutshane, iphakathi kwaye inde. Xa inqanaba lakho lokumelana nokungena kwi-uptrend ikwi-20,90 euro. Ngamanye amagama, imalunga nokufezekisa le njongo kwaye inokwenzeka nangaliphi na ixesha ngokusekwe kwixabiso le-Endesa. Inqanaba lokuba bonke abatyali mali balinde kakhulu ngenjongo yokuba yinxalenye yale nxalenye yezabelo.
Akunakulityalwa ukuba inani elibalulekileyo lokunyuka kwamahhala lithetha ukuba sele akukho zixhathisi ngaphambili. Ukuziqhelanisa kuthetha ukuba ungaya ukuya kuthi ga apho ufuna khona njengoko kungekho mida kwezi ntshukumo kwiimarike zezabelo. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko. Ngayiphi na imeko, iya kuba linyathelo elibaluleke kakhulu ekungeneni kwabanini zabelo abatsha kweli xabiso lidityanisiweyo kwisalathiso esikhethiweyo sentengiso yesitokhwe saseSpain, i-Ibex 35.
I-MS ihlaziya ixabiso layo phezulu
Enye yeendaba ezifanelekileyo kule veki yile ibhekisa kuMorgan Stanley anyusa ixabiso le-Endesa. Ukuya kuthi ga kwinqanaba ababeke lona ixabiso ekujolise kulo 21 euro ngesabelo ngasinye ukusuka kwi-20,2 euro yangoku. Oku kuthetha ukuba ukuphindaphinda okunokubakho kusondele kakhulu kwi-3,5% kumaxabiso abo. Ezinye iindaba ezimnandi kubatyali mali abancinci nabaphakathi abatyaliweyo ngoku kwixabiso. Ayothusi into yokuba banethemba elikhulu lokuba inokuba nesinye isitshixo esifanelekileyo.
Kwelinye icala, ixabiso elinikwa nguMorgan Stanley lisondele kakhulu kwimvumelwano yabahlalutyi, ababeka ixabiso layo nge-21,03 euro, ezinokubakho nge-3,65% kunye nengcebiso yokugcina. Ngale ndlela, asinakulibala ukuba i-Endesa, ngokweziphumo zekota zamva nje, izuze phantse i-1.200 yezigidi zeerandi kwiinyanga ezilithoba zokuqala zalo nyaka. Oko kukuthi, ngokunyuka kwe-10% ngaphezulu kunaphakathi kukaJanuwari noSeptemba wonyaka ophelileyo. Ngokukodwa, ivela kwintsebenzo yentengiso ekhululekileyo.
Ngokumalunga nomnye umxholo ongathandabuzekiyo onjengokwabiwa kwezabelo phakathi kwabanini zabelo kule nkampani ibalulekileyo yombane. Uya kuwusasaza phi umvuzo kufutshane ne-7%, Njengoko besesitshilo ekuqaleni kweli nqaku. Ewe, oku kuya kulwa nokuphuma okuphuma kwixabiso le-Ibex 35. Nje ukuba ixabiso lalo libe kumda we-21 euro ngesabelo ngasinye. Lo mvuzo wabanini zabelo uza kusebenza nge-2 kaJanuwari, xa uza kuya kwiakhawunti yokonga yabatyali mali.
Ukuziqhelanisa oko kuthetha ukuba iya kuncitshiswa kwixabiso lakho lodweliso. Nangona kunjalo, kuqhelekile ukuba emva kweeseshoni ezimbalwa zokurhweba buyela kwinqanaba lokuqala lamaxabiso ke ngokomgaqo ngumsebenzi onenzuzo kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho banokwenza khona iphothifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo. Ngokuhlawulwa okungaguquguqukiyo kwaye kuqinisekisiwe minyaka le nantoni na eyenzekayo kwiimarike zezemali. Njengelinye lamaxabiso aphambili ongezelelweyo esenzo.
Ixesha elifanelekileyo le-electrics
Ngayiphi na imeko, ukusebenza kakuhle kwe-Endesa kwimarike yemasheya kuhamba kunye nomzuzu ogqwesileyo iinkampani zombane ezihamba nawo kwilizwe lethu. Phantse zonke ziqala kwimeko efanayo kuba zikwimeko, okanye ubuncinci zisondele ekufezekiseni, zokunyuka kwamahhala. Umzekelo, Iberdrola, Enagás okanye iRed Eléctrica Española Kwaye oku kuyabanceda ukuba baphinde bahlaziywe ukusukela ngoku. Ngaphandle kwezinye izinto eziqwalaselweyo zobuchwephesha kwaye mhlawumbi kude kube kwinqanaba lokujonga.
Kule meko ngokubanzi, ayothusi into yokuba izabelo ze-Endesa zinendlela ephezulu yokunyuka kwiiveki ezimbalwa ezizayo okanye kwiinyanga. Ke ngoko, iya kuba lelinye lamaxabiso ezinto zokulingana zaseSpain ekuya kufuneka zibekhona jonga kakhulu kule mihla. Ukongeza, awungekhe ulibale ukuba isebenza njengendawo ekhuselekileyo ngamaxesha anzima kakhulu kwiimarike zezemali. Kunyaka lowo khange ube mhle kwiqela lesizwe kwaye kuya kuba ngcono ukulibala iziphumo zakhe ezimbi ngaphambili.
Ukwamkelwa okuhle kunciphiso
Kwelinye icala, abatyali zimali bazamkele iindaba zokuba i-Endesa izakunciphisa izabelo zayo ngo-2021 iya kwabela i-80% yenzuzo yayo kulo mvuzo kwaye oko kuye kwaqondwa ziimarike zemali njengomnqweno wenkampani ukwandisa ubukho bayo kwicandelo kule minyaka izayo. Oku kufanele ukuba kuguqulele ekuphononongweni kwamaxabiso awo kwimarike yemasheya. Nangona, ewe, ukuxabisa okuphezulu akulindelwanga emva konyaka olungileyo ebenalo kulo nyaka sele uza kuphela.
Kuyimfuneko ukuvavanya ukuba yinkampani edwelisiweyo ezinokuzinza okukhulu ekuhambisaneni namaxabiso ayo. Ngokufanelekileyo, ayibonisi ukungazinzi okuphezulu kakhulu Kwaye akukho mahluko ubanzi phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi kwiseshoni efanayo yorhwebo. Le yinto exabiseke kakhulu kwiprofayili yomtyali mali echazwe kakuhle. Apho ukhuseleko lukhona ngaphezulu kwengeniso onokuyifumana kwiimarike zezemali. Ijolise kwezona zikhuselayo okanye zigciniweyo ezigciniweyo kwiimarike kunye nexesha eliphakathi ukuya kwelide.
Okokugqibela, kufanele ukuba icaciswe ukuba ngeli xesha ukuthatha isikhundla kwixabiso kuvelisa okungcono kuneziphumo ezibi. Ngokuchanekileyo ngenxa yokungena kwinkqubo ebaluleke ngokukodwa njengokukhutshelwa simahla. Apho kukho okungaphezulu kunokufunyanwa kunokulahleka kwaye oku kuyaziwa ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi abagqiba ekubeni bangene kwixabiso. Kwezinye iimeko, ngokusebenza ngamandla ukwenza ukonga kwakho kunenzuzo kwezi zihlandlo zichanekileyo. Ngaphaya koko zinokuveliswa uthotho lokulungiswa ukususela ngoku ukuya phambili. Into ethi kwelinye icala iqheleke kwaye inqaku elithile lisengqiqweni kwaye isempilweni kuguquko lwayo olulandelayo kwiimarike zezabelo.
Ngayiphi na imeko, inyani ibonisa ukuba i-Endesa yenye yezokhuseleko lwamashishini esizwe kunye neyona nto ilungileyo kwezobuchwephesha. Ngethuba elikhulu lokuthenga kunokugcina, ubuncinci kwixesha elifutshane. Nangona ayijoliswanga kwimisebenzi yorhwebo ngenxa yeempawu ezizodwa eziboniswa leli xabiso lombane. Uludwe lwabameli abaninzi bezezimali, ngakumbi emva kwehlobo elidlulileyo. Apho iimeko zabo zitshintshile kakhulu kwaye ubungqina obulungileyo boku kukuphuculwa okwenziwe nguMorgan Stanley. Ukunyusa ixabiso layo ekujoliswe kulo, into eyenziwe lixabiso kakuhle kwezi seshoni zeveki. Into ethi kwelinye icala iqheleke kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile lisengqiqweni kwaye isempilweni kuguquko lwayo olulandelayo kwiimarike zezabelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Endesa kumda wokunyuka simahla